NNUKWU ỌGBA AGHARA DỊ N’ETITI EBỌNYI NA CROSS RIVER – hoo!haa!!
Egbuela ihe ruru mmadụ iri na atọ ma gbakwa ọtụtụ ụlọ ọkụ n’ime obodo Ukele dị n’okpuru ọchịchị Yala nke steeti Cross River nakwa ndi agbatobi ha ndi Izzi nke steeti Ebonyi.
Esem okwu ha abụrụla ihe na-emezi kwa afọ. Ajọ ọnọdụ a nke malitere n’afọ puku abụọ na atọ maka izọ ana, na-eseputakari isi ma amalite ikọ ji nakwa osikapa. Esem okwu a eriela isi ọtụtụ ndi mmadụ
Ọgba-aghara nke dị n’ala ugbu a ka anyị na-anụ na-ọ malitere na Mọndee izu ụka gara aga mgbe ekwuru na anọrọ n’ugbo gbagbue otu nwanyị. Ka aga-asị na nke a ezughị oke, n’ụbọchị Wenesidee na eso Mọndee ahụ ka-ekwuru, na ndi Izzi nọchiri ụmụ ntorọbịa ndi Ipuolo mgbe ha si nzukọ ala ma jirikwa egbe merụọ ọtụtụ n’ime ha ahụ.
Tigbue na zọgbue nke ugbu a, kpụ ọkụ n’ọnụ malitere n’ụbọchị Faraidee, dịka Mazị Vincent Egbe bụ onye na-ahụ maka mmekọrita ọhaneze na aka na-achị steeti Cross River bụ Sinetọ Ben Ayade siri kwue, mgbe ndi izzi wakporo ndi nọ n’ọgbakọ nke ndi uwe ojii mba nabọ ahụ kpọrọ maka ịkpa ka aga-esi weta udo n’ebe ahụ.
N’okwu ya, mgbe ha nọ n’ebe ọgbakọ ahụ, na-eche ọbịbịa ndi isi uwe ojii mba nabọ ahụ, ụmụ ntoroọbịa wakporo ha ma gbakanyewe egbe n’etiti igwe mmadụ ahụ. Mazị Egbe kwukwara na ha merụrụ ọtụtụ ndi mmadụ ahụ.
Ọ sịrị na mgbe nke a mere, na ụmụ ntoroọbia ndi Ukele jisiri ike, jikọta onwe ha ma chụchie ndi bịara ọgụ ahụ azụ. N’okwu ya, ọ bụ ọgba aghara sotere nkea ka-e jiri lụọ ogụ dị egwu na Nkaleke nakwa Ndiabonyi. Ọ sịrị na ọtụtụ mmadụ tụfukwara ndụ ha n’ime ọgba aghara a.
Ọ sịrị na mbọ niile ha na agba ime ka udo chia n’etiti ha na ndi agbataobi ha a anaghị amita mkpụrụ n’ihe na ndi agbataobi ha na-atụkarị ha aka ọgụ n’ihu.
Mbọ ndi nta akụkọ anyị gbara inweta onye isi ndi uwe ojii nke steeti Cross River bụ Mazị Hafiz Inua n’ekwe ntị amitaghị mkpụrụ n’ihi na akara igwe ekwe ntị ya anaghị ekwe njide. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndi uwe oji steeti ahụ bụ nwada Irene Ugbo sịrị na ihe butere nke a bụ na onye isi ahụ gara ihụ ka ihe siri debe imi na anya n’ebe ahụ. O kwukwara na ụzọ esi ezirita ozi n’ikuku (network) ebe ahụ adịchaghị mma. N’ihi nke a, anaghị enweta nwa amadị a n’ekwe ntị.
Previous Post: NDI ANAMBARA EKWUOLA IHE EJI GBANWEE AHA ‘ABAKALIKI STREET’ N’ỌKA
Next Post: BUHARI, OSINBAJO KWỤSỊNỤ OGBUGBU ANA-EGBU NDI MMADỤ NA PLATO – Ụmụ Naijiria